सुवास नेम्वाङको नौ सिङे पारा
धैर्यकान्त दत्त काठमाडौं - आइतबार, फागुन ९, २०७७
महाभारतका प्रमुख पात्र हुन धृतराष्ट्र।
सय भाइ कौरवका पिता।
पाण्डवहरूमाथि कौरवले अन्याय गरिरहेको धृतराष्ट्रलाई थाहा थियो। तर, केही बोल्न सकेका थिएनन्।
द्रौपतिको चीरहरणदेखि पाण्डवलाई वनवास पठाउने कौरवका जिद्दीपूर्ण निर्णय धृतराष्ट्रलाई पनि मन परेको थिएन। तर, आफ्ना छोराहरू सामुन्ने मौन भएर बस्न बाध्य भए उनी।
अहिले नेपाली राजनीतिमा सभामुख सुवास नेम्वाङको तुलनापनि महाभारतका तिनै धृतराष्ट्रसँग गर्न थालिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड–माधव समूह सडक आन्दोलन गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भरोसा पात्रका रुपमा उभिएका छन् नेम्वाङ।
राजनीतिमा सभ्य र शालीन छवि बनाएका नेम्वाङ सुरूदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रको रुपमा चिनिन्छन्। प्रतिनिधिसभा भंगहुँदा पूर्वन्यायाधीशदेखि संविधानविद्हरूले प्रतिगमन भयो भनेर भनिरहेका छन्।
तर, स्वयं एक प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीसमेत रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ भने यसबारे महाभारतका धृतराष्ट्रजस्तै मौनता साँधेर बसिरहेका छन्।
हुनत प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै नेम्वाङको खोजी नभएको होइनन्। खासगरेर मिडियाहरू प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे बुझ्न नेम्वाङलाई सकेसम्म पछ्याए। तर, मुद्दा अदालतमा रहेको भन्दै प्रतिक्रिया नदिएर उनी मौन बसे।
‘अब प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौं। प्रधानमन्त्रीले अब प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन्’ संविधान जारी हुँदै गर्दा नेम्वाङले यस्तो भन्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको थियो।
र, संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा उनी आफैंले यस्तो भनेपछि नेम्वाङको खोजी स्वभाविक नै थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सुनुवाइ सकिएर सवैजना आदेश कुरेर बसिरहेका छन्।
तर, संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका अध्यक्षता गरेका नेम्वाङ भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई सही अथवा गलत केही भन्ने साहस गर्न सकिरहेका छैनन्।
ओली पक्षीय नेकपाले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको जनसभामा पनि नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको सवै प्रसंगमा ‘मैले होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो भनिरहनु भएको छ’ भन्दै उम्किए।
‘प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाट सोध्नुभयो जनता के चाहन्छन्?,’ नेम्वाङले भनेका थिए,‘तलबाट जनताले एक स्वरमा उत्तर दिए हामी निर्वाचन चाहन्छौं। नेपाली जनताले आफ्ना फैसला सुनाइसकेका छन्। जनताले फैसला गरिसके, हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं।’
यहाँसम्म कि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक कदम भनेर प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको दावीलाई पनि नेम्वाङले तथ्य दिएर पुष्टि गर्न चाहेनन्।
केबल भने,‘म कानुनको विद्यार्थी आफ्नो कुरा अहिले केही भन्दिन्। तर, समाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ त्यो निर्णय यताउती हुँदैन। उहाँ सयमा दुई सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ। म आफू आफ्नो कुरा भन्दिन्। अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट भन्छु। संसद विघटनको निर्णय फिर्ता हुँदैन। अदालतबाट समर्थन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि मलाई सा¥है विश्वास छ।’
संविधानसभाका अध्यक्षको नाताले पनि संसद विघटन गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइनुको कारण पछाडि संविधानको ‘स्प्रिट’ बारे नेम्वाङलाई जानकारी नहुने कुरै हुँदैन्।
किनभने उनले स्वयं विभिन्न फोरममा भनेका थिए,‘प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो। अब म फेरि चुनावमा जान्छु। चुनावमा जान सांसदहरू तयार थिएनन्। त्यसपटक आँखा चिम्लेर पास भो। यो त त्यो भो सिस्टम? तर हामीले त्यसलाई हटायौं। अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैनन्। संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेनौं।’
संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानबाट हटाइसकिएको भन्ने गरेका नेम्वाङलाई अहिले मौन भएर धृतराष्ट्र बन्नुपर्ने कस्तो बाध्यता आइपरेको छ ?
जबकि प्रधानमन्त्रीको शब्द पइँचो लिएर बोल्ने गरेका नेम्वाङ ‘दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा कसैले विरोध गरेको छैन। संसदमा उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखिएको छैन’ भन्दै आएका छैन।
संसदमा कुनै अवरोध नहुँदा प्रधानमन्त्रीले किन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो नेम्वाङ प्रष्ट्याउन सकिरहेका छैनन्।
बरू भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ –संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। म बहुमतको प्रधानमन्त्री, दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री, संसदमा मेरो बहुमत छ। कसैले संसदमा विरोध गरेका छैनन्। संसदीय दलमा मेरो विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राखिएको छैन। मेरो संसदीय दलभित्र निर्विवाद दुई तिहाइको म प्रधानमन्त्री काम गर्न भने नपाउने। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ म दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि मैले के गर्ने?’
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा पनि बहस गर्न नपाइने अवस्थामा कतिपयले अदालतलाई धम्की दिने काम गरिरहेको प्रति उनको आपत्ति छ।
नेम्वाङले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालतर्फ संकेत गरेका थिए।
‘हाम्रो कानुनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा समेत बहस गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ नेम्वाङले भनेका थिए,‘तर हाम्रा केही पूर्वप्रधानमन्त्री साथीहरू भनेअनुसार फैसला नआए इजलासबाट थुतेर सडकमा ल्याइन्छ भनिरहनु भएको छ। कसलाई धम्काएको हो? मैले बुझ्न सकिन्।’
तर, नेम्वाङ बसेकै विराटनगरको जनसभाका मञ्चबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक खाले धम्की दिइहाले।
ओलीले देश र जनताको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौं, यो आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्नुस,’ जनसभाका सहभागीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘कुनै किसिमको जालझेल, तिकडम, सेटिङ्गबाट विपक्षमा फैसला आउँछ भने हाम्रो आन्दोलन फेरी अगाडि बढ्छ।’
सरकारकै प्रधानमन्त्रीले धम्की दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहँदा नेम्वाङ टुलुटुल हेरेर बसिरहेका थिए।
अरू के नै गर्न सक्थे र उनी। ‘धृतराष्ट’ जो ठहरिए। मौन भएर बस्नै प¥यो।
म राजीनामा लेख्दिन : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन्। हिमालय टेलिभिजनसँगकाे अन्तर्वार्तामा ओलीले राजीनामा नदिने अडान व्यक्त गरेका हुन् । आयोमेल संवाददाता
ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने–प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सयभन्दा बढी सांसद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नवनियुक्त मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा अहिले पनि सयभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको जिकिर गरेका छन्। आयोमेल संवाददाता
प्रधानमन्त्री छाड्न र बनाउन ओली-प्रचण्डका दुःख
विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनैतिक शून्यतालाई सर्वोच्चको फैसलाले अन्त्य गरिदिएको सबैले महसुस गरे। फागुन १२ गतेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरे। धैर्यकान्त दत्त